Home Wararka Xiisada colaadeed ee magalaada Baladweyne oo ka sii daraysa
Xiisada colaadeed ee magalaada Baladweyne oo ka sii daraysa
Xiisada colaadeed ee magalaada Baladweyne oo ka sii daraysa. Xiisadda ayaa u dhexaysa Ciidamo uu hoggaaminayo Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan ee Dowlad Goboleedka Hirshabeelle Cali Jeyte Cismaan iyo Ciidamo beeleed ka horjeeda.
Ciidan beeleedka oo doonaya in Hirshabeelle laga saaro Beledweyne waxaa hoggaaminayaan Jeneraal Abukar Xuud iyo sarkaal lagu magacaabo Nuur Dheere. Labada Ciidan ayaa sida la sheegay isku horfadhiya gudaha magaalada Beledweyne halkaas oo ay xalay fariisimo ka samaysteen Ciidamo beeleedka taabacsan Gen. Xuud iyo Nuur Dheere.
Waxaa shalay deegaanka Qoylad ee dhaca duleedka magaalada Baladweyne ka dhacay dagaal xoogan oo u dhaxeeyay ciidamada maamulka Hirshabelle iyo ciidamo kale oo daacad u ah Janaraal Xuud.
Dagaalkan ayaa labada dhinac midbo kan kale ku eedeeyay in masuul ka ahaa bilaabashadiisa, waxaana dagaalkan la sheegay in labada ciidan kasoo kala gaaray khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Janaraal Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo wareysi siiyay BBC-da ayaa beeniyay in dagaalkiii shalay dhacay iyagu bilaabeen waxa uuna sheegay in ciidamada dowlada iyo kuwa Hirshabelle weerar kusoo qaadeen farsiinkooda.
Waxa uu sheegay Jen Xuud in ciidamo isaga ka amar qaata hada maamulayaan Baladweyne ayna halkaasi ka dhisayaan maamul cusub oo lagu magacaabo Hiiraan, isaga oo diiday in ay wax ku darsadaan maamulka Hirshabelle uu madax u yahay Cal Guudlaawe.
Warkan kasoo yeeray Jen Xuud ayaa imaanaya xili magaalada Baladweyne ka jiraan xiisado dagaal oo u dhaxeeya ciidamo taabacsan maamulka Hirshabelle iyo ciidamo beeleed kasoo horjeeda Hirshabelle, waxaana socda dadaalo xal loogu raadinayo colaada taagan.
Previous articleRW Suudaan oo caawa is casilay
Next articlePuntland oo ka hadashay iscasilaada madaxda guddiga doorashada
Xaalada Caafimaad Caruur badan oo ku sugan Beledweyn oo laga dayrinayo